Ndakaita kuishwetedza mboro ndikanzwa mwana achiita kuzuzuma nekunakirwa! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakaita kuishwetedza mboro ndikanzwa mwana achiita kuzuzuma nekunakirwa!
Nerimwe zuva ndayenda zvangu ku Gym apo ndainge ndatanga kuita ma dance lessons kuti ndigare ndiri fit. Mwana ainge akanaka iyeye and aigona kutamba kunge ndiye akatanga Zumba dance, plus aiwuya ku gym atori ready kare semunhu aiziva zvaaiyita.
Ndaiyita wekudongorera ne mirror ndikawona munhu akanditarisawo but ndaitonyarira ndaobva ndakuita zvangu madance ataidzidziswa right leg forward, left arm back and we change. Trainer wedu akabva ati Elena enda kumbera unoratidza vanhu kuti unotamba sei, ipapo ndipo pandikabva ndabata zita rake. Paaifamba kuyenda kumberi akabva awudza mumwe musikana ainge ari kumashure kwangu zvikanzi unofanirwa kusumudza makumbo even more than kusimudza kwaaiyita.Elena akafamba kuyenda kumberi kwe class ndokutanga kutamba haaa masasi ndakanakirwa ne step yaaifamba nayo achiyenda kumberi, akabva atanga kuti move your right leg and left arm simultaneously, simudzai makumbo ayo zvinesimba.
Trainer akawuya close kwandiri zvikanzi tarisa kumberi always uchitedzera music apa ndainge ndakatovarairwa hangu na Elena. Ndakachinja matambira zvichibva zvanzi it’s better now try kusiya your problems panze uyite zvemuno, trainer wuya akadaro achiti I seem distracted. Trainer wedu paakangobva pandiri ndakatanga kudongorera futi Elena nepa mirror apa beche rake rainge rakafuta muma tights ake ndokubva ndatanga kunanzva nanzva maLips angu and I think Elena akazviwona and she just smiled akanditarisa, ndakapererwa for a bit but ndakabva ndasekererawo.
Class yedu yakapera ndokubva ndamirira munhu wese kuti ayende and then ndokuyenda pakati pe studio ndokuzvitarisa pa mirror and started dancing zvangu ndega for about 20 minutes. Ndakatora zvinhu zvangu ndokunanga kuma locker room, vamwe vese vainge vayenda kunze kwa Elena. Inini I always stay a bit longer ndichitamba hangu ndega apa Elena takes nguva yake yekugadzirira, ndakapinda mushower apa mainge mune silence kunge ndini ndega ndainge ndasara mu Gym but ndakabva ndanzwa door rangu richivhurwa, ka perfume kandikanzwa ndakaziva kuti ndi Elena chete. Ndisati ndacheuka ndakabatwa mawoko, apa ndichinzwa minyatso yake yakamira ichibaya musana wangu.
Ndakataura nekazevezeve ndikati “What are you doing in here? tinogona kubatwa iye achibva ati kana tikasaita noise hapana anotinzwa. Elena haana kumirira kuti ndipedze kutaura ndakanzwa mawoko ake achindipuruzira muchiuno haa ndakapererwa masasi ndokubva ndangozembera musoro wangu pama shoulders ake apa iye achindibata bata mukati mezvidya zvangu. Elena akabva andikisa nekundirumirira muhuro ndikanzwa kupindwa nechando even though ndainge ndiri mushower inodziya, ndakatanga kuzvibvunza kuti inga zvese ari perfect.Takazotarisana ndokutanga kukisana zvainwisa mvura, ndakaita notice each drop of warm water sliding down my skin ichiyenda paari then mawoko angu obva atevera Elena achibva ayita kakuchemerera kamisa mboro.
Mwana ainge ane chipo chemagaro mhani iyeye shape yake yaingomisa mboro, ndainzwa mawoko ake achipuruzira muviri wangu wese. Kubatwa batwa kwandaiyitwa zvaikonzeresa zvekuti ndakabva ndashaya pekubata ndokuita focus nekubatwa kwandaiyitwa, handisati ndambonzwa mboro yangu ichimira nehukasha sezvayainge yaita musi uyu tirimo mushower mvura ichiyerera ichitirova muviri wedu.Ndakasimudza gumbo rake ndokuisa paside pedoor and semunhu ainge ari flexible beche rese rakavhurika apa mvura ichirova chete, apa ainge atota kupfuura kudirwa kwaaiyitwa nemvura. Ndakanyudza mboro yangu maari iri nyoro kudaro ndikanzwa Elena ayita kufemera pamusoro ndiye aaaahhhh uuuhmmmm mwana airatidza kuti arikunakirwa nemboro. Ndakakoira koira Elena akazembera madziro emushower apa ndichinzwa mboro yese iri mukati kusvikira ndatundiramo.